Ukususa Ipeyinti Abavelisi | China Ukususwa kwePeyinti kwiFektri yokuSusa kunye nabaXhasi
—Ukususwa kwepeyinti yokumakishwa kwendlela ——
LXD260C Oluzenzekelayo Iinkuphelostencils Kwisakhelo Ultrahigh Pressure Amanzi Jetting Ipeyinti / ngerabha Ukususwa
Singoyena menzi mkhulu wobuchwephesha eTshayina kunye nomzi-mveliso wokususwa kwepeyinti / ukususwa kwerabha. Itraki efunekayo, Umzekelo: ijac truck, K5L cab, Injini: Yuchai, YC4S160-50, Gearbox: fast-gear, 6DS60T, ngaphambili asi: 3.5T, asi angasemva: 8T, crossbeam: 230 * 75 * 6, ukudinwa: 10R22 .5, itayitera lokucoca umshini: Ubungakanani bokuhamba: 6800 * 2450 * 600, ubunzima obukhulu: 16T, umthwalo: 9.8T
LXD900 Remover Remover lokususa
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wokuphawula kwendlela. I-LXD900 yokumakisha kwendlela yokususa ipeyinti isetyenziselwa ukususa imigca yepeyinti ebandayo. Intloko yokusika intsimbi ye-Tupungato engenisiweyo inzima kwaye ijikeleza ngokukhawuleza. Intloko yokusika inobomi obude bokusebenza, kwaye kulula ukuyilayisha kwaye uyothule.
LXD1050 Remover Remover lokususa
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wokuphawula kwendlela. Injini: 11.0HP (ukuqala ngesandla okupholileyo ukubetha komoya ezine-injini zepetroli); Ubunzima bokusebenza: buhlengahlengiswe ngokwemeko yendlela yendlela, ngesiqhelo ingaphantsi kwe-3mm.
I-LXD260B ye-Ultrahigh yoXinzelelo lwaManzi lokuMakisha ukuSusa ukuMakisha ngeNdlela yokuSusa
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wokususa ukumakisha kwendlela yokuhambisa amanzi kunye nenkqubo yokutsala. I-LXD260B ye-ultrahigh-uxinzelelo lwamanzi lokumakisha indlela yokumakisha isusa inkqubo yokurhweba engeniswe eJamani, ixhotyiswe ngeJetstream 260 Series yohlobo lwempompo yoxinzelelo lwangaphandle oluvela eMelika.
I-LXD90-3B yoXinzelelo oluPhakamileyo lwaManzi lokuMakisha ukuSusa ukuMakisha ngeNdlela yokuSusa
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wenkqubo yoxinzelelo oluphezulu lokususa ukumakisha kwindlela yokususa. Ingasusa ukumakisha kwendlela ngaphandle kokonakalisa umphezulu wendlela, kwaye amanzi amdaka kunye nentsalela inokutsalwa kwitanki lamanzi amdaka, Itanki lamanzi amdaka linokuhlala malunga ne-700kg yamanzi amdaka (omnye umthamo xa uceliwe).
I-LXD90-3A yoXinzelelo oluPhezulu lokuSusa ukuMakisha kweNdlela
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wokususa ukumakisha kwendlela yoxinzelelo lwamanzi. Isetyenziselwa ukususa zonke iintlobo zemigca yokumakisha yendlela kunye noxinzelelo lwayo lwamanzi.Izibonelelo zokusebenza ngokulula, ulondolozo olulula, ukusebenza ngokukuko, ngaphandle kokonakalisa umphezulu wendlela, ubume bendalo.
Ukususwa kwe-LXD D-390 Thermoplastic Road
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi-mveliso wokususwa kokumakisha kwendlela ye-thermoplastic. Sisixhobo sobuchule esisetyenziswa ngokubanzi ukususa imigca yokumakisha yendlela. Umatshini unezibonelelo zamandla awomeleleyo, isantya esiphezulu, ukusebenza ngokulula nangokukhuselekileyo, ukungcangcazela okuphantsi, ingxolo kunye nothuli, njl.